नेताले ल्यापटप पनि छाडेनन् ! - Everest Dainik - News from Nepal
नेताले ल्यापटप पनि छाडेनन् !
काठमाडौं, भदौ २३ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले नै संसद सचिवालयबाट सुविधामा पाएर लगेका ल्यापटप अझै पिर्ता नगरेको पाइएको छ । संविधानसभा भंग भएको १० महिना बितिसक्दा पनि नेताहरुले ल्यापटप फिर्ता गरेका छैनन् ।
यसरी ल्यापटप फिर्ता नगर्नेमा प्रमुख सचेतक र दलका नेता समेत रहेको संसदको स्टोर शाखाका प्रमुख विनोदकुमार मालीको भनार्इ उद्धृत गर्दै नेपाल समाचारपत्रले खबर छापेको छ ।
याे पनि पढ्नुस २ नं प्रदेशका सांसदलाई ल्यापटप वितरण गरिने
स्टोर शाखा प्रमुख माली भन्छन्, ‘यसबारेमा नेताहरुलाई खबर गरिएको छ । उहाँहरुले आफैंले जानेर बुझाउनुपर्ने हो हामीले भनिरहन पनि मिलेन ।’ मालीकै भनाइमा नियमाअनुसार सुविधा लिनु स्वभाविक भए पनि प्रयोजन सकिएपछि पनि फिर्ता नगरिनु अव्यवहारिक काम हो ।
ट्याग्स: laptop, ल्यापटप अझै पिर्ता भएनन